मोटोपनको समस्याबाट छुटकारा पाउनको लागि जिरा सेबनको यति ठुलो भूमिका अवस्य पढ्नुहोस - Mitho Khabar
मोटोपनको समस्याबाट छुटकारा पाउनको लागि जिरा सेबनको यति ठुलो भूमिका अवस्य पढ्नुहोस
February 5, 2020 mithokhabarLeaveaComment on मोटोपनको समस्याबाट छुटकारा पाउनको लागि जिरा सेबनको यति ठुलो भूमिका अवस्य पढ्नुहोस
काठमाडौ – हाम्रो भान्सामा सजिलै पाइने मसला हो जिरा । तरकारीमा स्वादको लगी प्रयोग गरिने जिरा हाम्रो स्वास्थ्यको लागी फाइदाजनक छ । जिराको सहि प्रयोग गर्न जाने धेरै समस्याबाट जोगिन सकिन्छ । हाम्रो शरिरको तौल घटाउन पनि जिराले धेरै सहयोग गर्छ ।
नियमित जिराको सेबन गर्ने गरेमा पाचन पक्रिया पनि राम्रो हुन्छ । जिरामा ‘हिलिङ’ गुण हुन्छ । यसको अर्थ निको पार्ने गुण भन्ने गरिन्छ । जिरालाई पानीसँग खाएमा मोटोपन कम हुन्छ । जीराको सेबनले भोक घटाउने गर्छ ।
दैनिक ए‍क चम्चा जिरा पानीसंग पिएमा भोक हराउछ । यसको सेबनले रीरमा भएको चिल्लोको मात्रा घटाउछ । यसको सेबनल तपाईको मेटाबोलिजम बढाउँछ साथै शरीरलाई फिट राख्छ ।
अन्य समाचार :हिस्टेरिया हटाउनेदेखि स्मरणशक्ति बढाउनेसम्म बोझो किफायती तराईदेखि हिमालसम्मै पाइने बोझोमा धेरै औषधीय गुणहरु पाइन्छन् । आयुर्वेदमा बोझोको विशेष महत्व रहेको पाइन्छ ।
बोझो समुद्रीसतह देखि लगभग २००० मीटर उचाईसम्म पाइन्छ । बोझोको बोट दलदल परेको तथा सीमसार क्षेत्रमा पाइन्छ । खास गरी हिमाली क्षेत्रमा नदी तथा खोला किनारामा पाइन्छ ।
यो विरुवा जमीनमुनि रहेको काण्डबाट पलाएर आउँछ। काण्ड जमीनमुनि समकोण भएर २० से.मी. देखि १ मी. सम्म फैलिएको हुन्छ । यसको स्वाद परपराउने पीरो र केही तीतो–तीतो हुने भएपनि वास्ना भने सुगन्धित हुन्छ ।
अङ्ग्रेजीमा स्वीट फ्ल्याग भनिने बोझोको वैज्ञानिक नाम अकोरस कालामस हो । यसको पात ५ देखि ४० से‍.मी.लामो र १ देखि ३ से. मी. चौडा हुन्छ । टुप्पो तीखो भएको हुन्छ भने काण्ड जमिनमुनी रहन्छ । यो काण्डलाई सजिलैसँग टुक्रा गर्न सकिन्छ। यसको भित्री भाग सेतो वा अलि गुलाफी रंगको हुन्छ ।
काण्डको माथिल्लो सतहमा मसिनो झुस हुन्छ र तल्लो सतहमा जरा झरी दाग बसेका हुन्छन् । यसको वासना सुगन्धित र स्वाद अलि परपराउने पीरो र तीतो हुन्छ। यो जडीबुटी रोपिएको एक वर्षपछि नै संकलन गर्न सकिन्छ ।
हरेक बसन्त ऋतुमा माटो मुनिबाट काण्ड संकलन गरिन्छ । संकलन गर्दा जमीनभित्र काण्डको केही भाग छोड्नु पर्दछ । जसले गर्दा विरुवा मासिने डर हुँदैन र यसै काण्डबाट अर्को वर्ष बोट आफै उम्रिन्छ ।
सामान्यताया बोझोको काण्ड र जरालाई धोएर मसिनो टुक्रा पारेर काटेर खाने गरिन्छ । तर यसलाई आवश्यकता अनुसार मात्रा मिलाएर खानुपर्छ । यदि बढी खाएमा स्वास्थ्यमा नकरात्मक असर पनि गर्न सक्छ ।
बोझोका औषधीय गुणहरु
-यदि घाँटी दुखेको वा ज्वरो आएको बेला बोझो खाएमा निको हुन्छ ।
-बोझोको नियमित सेवनले शरिरको जोर्नी दुखेको र पेट दुखेको पनि निको पार्छ ।
-यदिमा तपाईंमा मानसिक तनाव धेरै छ भने दैनिक बोझो खानुस्, विस्तारै कम हुन्छ ।
-बोझो हिस्टेरिया, अनिन्द्राको समस्या भएकाहरुका लागि अचुक औषधी हो ।
-बोझो नियमित खाएमा स्मरणशक्ति बढाउन मदत गर्छ ।
-त्यस्तै बोझोले उच्च रक्तचाप नियन्त्रण, दम रोगका साथै वान्ता आउनबाट पनि रोक्छ ।
– घाँटी बसेको निको पार्न, भोक जगाउन, पिनासको उपचार गर्न, बाथ, ज्वरो कफदोष आदि रोगहरुमा बोझोको काण्डलाइ प्रयोग गरिन्छ।
-पिसाब र दिसा लगाउन र उल्टी गराउन, पीडा कम गर्न रक्तचाप घटाउन र श्वासप्रश्वास गति कम गर्नुका साथै पेट दुखाइ कम गर्न पनि बोझोको प्रयोग गरिन्छ ।
April 27, 2020 April 27, 2020 mithokhabar
दाँतको दुखाइबाट कसरी जोगिने?कति मिनेट दात माझ्ने? कसरि माझ्ने ? पूरा पड्नुहोस